Iyo pathological kutaurirana kweinternet | Kudzidziswa Kwekuziva
Mwaka wadarika ndakanyora chinyorwa chine mhanza pamigumisiro yakaipa yehwendefa pavana, uye zvakanyanya pane nei vana vachikwanisa kushandisa matekiniki zviri nyore famba. Kutevera nokungwarira zvizvarwa zvitsva ibasa kune avo vane mutoro kune vana nevachiri kuyaruka (kubva kuvabereki kuenda kuvashandisi), asi havafanirwe kuita isu kukanganwa kuti isuwo tiri nyaradzo yekukurukurirana kwakashandurwa kunoitwa nevezvenhau venhau (uye kwete chete) .
Google aimbove mugadziri Tristan Harris zvinonyatsotaura nezve Kubvunzwa kwehuropi kutsanangura maitiro makuru ewebhu anogadzira isu kutarisa uye kufarira. Nhasi, nenharo dzakafanana. zvakare Arturo Di Corinto afunga kudhonza plug pane zvemagariro uye maapp. Izvo zvichiri kutanga kutaura, data iri paruoko, yemigumisiro yetekinoroji nyowani pane yedu yekuziva kugona (kunyangwe kana kuderedzwa kwekutarisa spans chinhu chimwe chinhu vazhinji vangavavarira nemeso avo kuvharwa), asi isu tichiri kuenzanisa kutaurirana mumapuratifomu makuru (Facebook , Youtube, Instagram) kuratidza iyo pathological zvikamu.
Iyo yakakura yehuwandu uye isingagumi yezvinyorwa
Muna 70s Paul Grice akatsanangura 4 hurukuro dzekukurukurirana, kana nheyo dzekubatana muhurukuro:
Iyo huwandu hwehuwandu hunoverengwa "Usaramba uchingodzokorodza kana kuwanda." Muchidimbu, ruzivo runofanirwa kuve rwakakwana kuchikumbiro, kwete zvimwe kana zvishoma. Iye zvino ngatifungei nezve zvave zvichiitika kwemakore mashoma kumagumo kwekutamba kwevhidhiyo yeYouTube: vhidhiyo nyowani inotanga, isina kusarudzwa nesu. Kuti tidzivise izvi, isu tinofanirwa kushinya "Kanzura" nenguva. Muchidimbu, chiito chakajeka chinodiwa asiri gamuchira zvinyorwa zvitsva. Vashoma vanopinda muYouTube vaine chinangwa chekupedza maawa ipapo. Kazhinji unopinda kuti uone vhidhiyo imwe chete. Kana Youtube yakukochekera, zvakadaro, iyo vhidhiyo imwe inogona kuve isingaperi.
Ngatimbofungidzirai mamiriro akafanana nemunhu wenyama. Tinodaidza shamwari kuti tizive nguva yechiratidziro manheru ano. Shamwari yacho inotipa ruzivo. Kana tikasarembera munguva, zvakadaro, tanga kutaura nesu nezve imwe show yawaona nezuro uye zvinogona kutifarira. Wobva waenderera mberi nekuongorora mafirimu ese awakamboenda. Iyo miniti miviri yekufona inova hurukuro yeawa. Izvo zvakakosha kuti uzive, pakupedzisira, kuti anosarudza zvinyorwa.
Chikuva chega chega chine nzira dzacho dzekukupa ruzivo rwakawanda uye rwakawanda kupfuura zvawaitsvaga pakutanga: kubva pakutamba kwega kwega mavhidhiyo eYouTube, kuenda kumupumburu usingaperi weFacebook neAustralia, uchidarika "ungafarirewo" mablog kana ivo "Vashandisi vane watenga chinhu chako wasarudzawo… ”kubva kuAmazon. Izvi tsoka pamusuwo haimboratidzi mhedzisiro yayo pachena uye ichagara ichipiwa sechinhu chidiki, kunyangwe kana kamwechete kudzvanya kuchatungamira kurasikirwa nehafu yezuva kana kutenga zvimwe zvigadzirwa zvishanu.
Zvinangwa zvako zvinova zvinangwa zvangu
Yakabatanidzwa kune yapfuura poindi ndiyo hurukuro yekusiyana kwezvinangwa. Isu tinowanzoda ruzivo rwakananga. Mapuratifomu anotipa iwo iwo ruzivo (chinangwa chedu), asi nekufumura zvavo zvisati zvaitika kana panguva imwe chete (zvibodzwa zvavo). Nzvimbo iyo isu tinonyora ma tweets yakafanana mune iyo feed yedu inoonekwa. Nzvimbo yeFacebook yechiitiko yakafanana neyezvakajairwa generic.
Zvakaita sekuti "Ndichakuudza kuti inguvai nekukuratidza wachi, saka haugone kubatsira asi kucherechedza bhachi remusoni. Unoziva, ndine chitoro chose "
Sei uchisarudza apo ini ndinogona kukusarudzira iwe?
Rega nditaure mapepa eTV anobva pane zvawaona kare. Kuti iwe unoraira nhau zvichibva pane izvo zvaunofarira zvakanyanya. Rega ndikupe iwe zvakatsanangurwa dzimwe nzira pane kubvunza mhinduro yekutanga. Dai akusarudza iwe mhinduro dzinokwanisika dzekupa kune vamwe.
IyoGmail payakatangisa Smart Reply, dzemhinduro dzinokurumidza kupihwa maemail achangotambirwa kuburikidza nekukanya kamwe chete, ini ndakabva ndafunga maseti ekupindura akavharwa. Ivo vanoshanda mumunda wekutaurirana hutachiona vanoziva kuti zvinokurudzirwa kushandisa mhinduro dzakavharwa nevaya vasingakwanisi (kana kuti vasisakwanise) kutaura zviri nyore nenzira yakarongeka.
Iye ataurwa pamusoro apa Tristan Harris anoti: kana iwe ukatarisa menyu, unotarisa zvaunosarudza. Kana iwe ukapa yakavhara seti yekuita kunhau yenhau, iwe unowana vanhu kuti vasarudze pakati peumwe wavo (wakamboona here kuti zvakashata zvinoitika pasi peFacebook zvinyorwa zvinongori "Hasha"?). Kana iwe ukasarudza izvo zvinotumirwa kuratidza kutanga, ipa misoro iyo ichafungidzirwa nezvayo mukati mezuva. Pamberi pemenu - kana zvisati zvasarudzwa zvemukati, isu tinofanirwa kuzvibvunza isu:
zvandinoona zvinosangana nezvandinoda kana izvo zvevaye vakaita peji?
pane zvimwe zvisarudzo kunze kweizvo zvinopihwa pane iyo menyu?
Pindura "Smart" kubva kuGoogle blog.
Ndipe pfungwa dzako
"Ndinokunyorera paWhatsapp, pindura kana uine nguva".
Tinogona kufunga nezve email kana iyo whatsapp meseji setsamba iri mugomba, asi chokwadi ndechekuti izvi hazvisizvo. Nguva dzose rangarira Tristan Harris kuti makambani anozviziva izvozvo meseji inokanganisa chiitiko zvinoita kuti vanhu vatange kupindura. Naizvozvo, iyo yekukurukurirana meseji inotaridzika senge munhu arikugogodza iwe uchinge uchishanda, uchiramba uchikumbira kuti utariswe Sei?
Kuburikidza nezviziviso zvinokonzeresa iko kunzwa kwekufanirwa kupindura kuitira kuti iyo tsvuku icon ine iyo nhamba inyangarike
Kuburikidza "nezvikwekwe" kana "meseji inoverengwa pa ..."
Ndiri kuda ruzivo rwebhizinesi, asi hazvina hunhu kufonera waunoshanda naye na23pm. Ndinogona kumusiira message paWhatsapp. Tarisa, akazviona. Ehezve panguva ino aigona kupindura ...
Iyo rondedzero yezvikonzero nei hukama hwakasimba nemagariro midhiya uye makuru mapuratifomu zvakajairika anogona kuve nehuturu mhedzisiro zvirokwazvo haigumi pano. Kuzviisa muchidimbu, kechipiri Harris:
Ziziviso inoshandisa nzira yekugutsa yakafanana neiyo yemakomarara slot
Nhau dzezvemagariro dzinotamba pane kutya kwedu kurasikirwa kwakakosha nhau (saka isu tinoshamisika zvakanyanya kusavimbika)
Zvemagariro midhiya zvinotarisa kugutsikana kwevanhu uye iyo "do ut des" yezvakada, zvirevo, zvibvumirano
Makambani anoita zvimwe zviito zvisingadiwe (semuenzaniso kuzvinyora kubva pane imwe saiti) zvakanyanya kuoma pane zvaidiwa, izvo zvinowanzoitwa mukupfura kumwe chete
YeKorindeuyezve, inosimbisa zvimwe zvinhu:
Iko kutarisa kuri pamakakatanwa. Chinangwa cheavo vanoda kuve nemaonero akawanda ndechekugamuchira kana kugadzira kusawirirana
Nziyo dziri kupfupika uye diki kufunga - kubva twitter mavara kusvika memes
A nzvimbo iyo munhu wese ane kodzero yakafanana yekutaura kunyangwe kugadzirira kwavo kune iyo Dunning Kruger mhedzisiro
Nhau dzezvemagariro dzinopa voyeurism uye narcissism
Zvemagariro venhau vakasununguka… asi havasi kutibhadhara. Muchokwadi, isu "tinogadzira" zvakawanda muhomwe dzemakambani akasiyana pasina chatinowana mukudzosa (kunze kwekunge muverengi wechinyorwa ichi ari mupepeti)
Izvo zvinetso zvine chekuita nenhema feki uye chengetedzo
Vazhinji uye vanhu vazhinji varikuregedza pane kukwana kana kuzere kushandiswa kwesocial media. Vamwe havadi (kana havagone) kuzviita. Zvisinei, tarisa pane rudzi rwekutaurirana uye nzira dzinoshandiswa kubata isu kutarisa uye kutungamira zvatinoita zvinogona chete kutibatsira kutarisana nenzira yekuziva idzi nzvimbo "dzechokwadi" dzine zvishoma zvishoma, zvichipiwa kukanganisa kwavanoita pahupenyu hwemumwe nemumwe wedu.
Zvinyorwa zvinoenderana: Mwanakomana wangu haatauri zvakanaka, asi ndakaona mashandisiro aanoita kibao. Anogona kuita zvese!
uropi kubheka, digital kutaurirana, google, kuzvigutsa, harris, evanhu vezvenhau, marongero emubhadharo
Pathological kutaurirana kwewebhu2018-10-292020-02-22http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2018/10/artificial-intelligence-3382507_960_720.jpg200px200px
Dementia: Njodzi zvinhu uye zvinodzivirira zvinhuZvinyorwa, Dementia, Neuropsychology
Ungwaru, kutarisisa uye kuita kwedzidzo. Chii chinonyanya kukosha?ADHD, Kudzidza, Zvinyorwa, SLD, Executive mabasa, Executive mabasa, Ungwaru, Neuropsychology